Waa maxay oggolaansho hore? Baro sida ay u shaqeyso iyada oo qayb ka ah barnaamijka maaraynta isticmaalka.
Adeegyada qaarkood waxay u baahan yihiin oggolaansho hore
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW) wuxuu daboolaa daawayn iyo adeegyo badan. Qaar ka mid ah adeegyadan waxay u baahan yihiin oggolaansho ka hor, halka kuwa kalena aysan u baahnayn.
Oggolaanshaha hore macnaheedu waa in adeeg bixiyahaagu uu nala soo hubiyo si loo hubiyo inaan dabooli doono daaweyn, daroogo, ama qalab qayb ka mid ah. Oggolaanshaha hore wuxuu ka mid yahay istiraatiijiyadda maaraynta isticmaalka.
Maareynta ka faa'iideysiga waa hab dib-u-eegis ah in daryeelku caafimaad ahaan muhiim u yahay oo ku habboon yahay bukaannada.
Waxa aad u baahan tahay inaad ogaato:
Haddii aad rabto inaad baaris ku sameyso adeegyada sida caadiga ah u baahan oggolaansho hore, booqo annaga Bogga Oggolaanshaha Hore ee Bixiyaha.
Fadlan la hadal dhakhtarkaaga si aad u xaqiijiso in daaweyn cayiman ay u baahan tahay oggolaansho hore.
Haddii adeeg u baahan yahay oggolaansho hore, maahan inaad wax soo gudbiso. Dhakhtarkaaga ama bixiyaha xanaanada caafimaadka ayaa mas'uul ka ah gudbinta codsiyada ogolaanshaha hore ee CHPW.
Adeegyada qaarkood waxay u baahan yihiin gudbin. PCP looma baahna inuu helo ogolaansho u gudbinta xubin ka mid ah bixiye kaqeyb galaya ama khabiir ka baxsan shabakada. CHPW waa inay dib-u-eegis ku sameysaa oo ay soo gudbisaa Qorshe Gudbinta Idman marka xubintu u baahan tahay inay aragto PCP ka baxsan PCP-ga loo xilsaaray ama kooxdooda. Intaas waxaa sii dheer, xubnaha ku jira barnaamijka Dib-u-eegista Bukaanka iyo Isuduwaha (PRC) waxay u baahan yihiin Gudbinta Oggolaanshaha Ogolaanshaha ee laga helo PCP-kooda si loo ansixiyo daryeelka xubinta ay ka hesho bixiyeyaasha kale iyo takhasusleyaasha kale.
Ansixinta ama diidmada dalabka
Shaqaalaha ruqsadda haysta ee CHPW waxay dib-u-eegaan codsiyada oggolaanshaha hore ee ku saleysan siyaasadaha daaweynta (haddii kale loo yaqaan shuruudaha). Kheyraadkaas waxaa ka mid noqon kara Tilmaamaha MCG, Go'aaminta caymiska Medicare, iyo Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington dukumiintiyada shuruudaha caynsanaanta daaweynta.
Codsiyada waxaa dib u eegay shaqaalaha shatiga leh ee ku habboon, oo ay ku jiraan - laakiin kuma xadidna - kalkaaliyayaasha caafimaadka, agaasimaha caafimaadka, iyo farmashiistayaasha. Waxay adeegsadaan heerarka soo socda markay dib u eegaan oggolaanshaha:
Go'aan sameynta waxay ku saleysan tahay oo keliya habboonaanta daryeelka iyo adeegga iyo jiritaanka daboolid.
CHPW ma abaalmariyo xirfadlayaasha ama shaqsiyaadka kale ee soosaarka diidmada (go'aaminta faa'iidada xun) ee caymiska.
Dhiirigelin dhaqaale oo loogu talagalay go'aan qaadayaasha ha dhiirrigelin go'aannada taas oo keenta in laga faa'iideysto (dadka isticmaala adeegyo yar oo ay xaq u leeyihiin).
Ku qanacsaneyn go'aankayaga
Haddii codsi la diido markii aad u maleyneyso inay ahayd in la oggolaado, waxaad xaq u leedahay inaad soo gudbiso rafcaan. Booqo annaga Bogga Cabashooyinka iyo Racfaanada si loo barto sida.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan oggolaanshaha hore, maaraynta ka-faa'iideysiga, iyo sida ay CHPW u go'aamiso adeegyada aan dabooli karno, fadlan booqo Boggayaga Hore ee Oggolaanshaha Su'aalaha.